Nke a ọ bụ Ọgwụgwụ nke Hillary Clinton? | Martech Zone
Nke a bụ Ọgwụgwụ nke Hillary Clinton?
Agbanyeghi na m choro iche na onwe m dika onye Libertaria, ikekwe onwere obere onye Anarchist n’ime m. Obi na-atọ m ụtọ ọchịchị onye kwuo uche ya na ịntanetị yana ọnụ ahịa dị ala nke teknụzụ. Ha abụọ binyere onwe ha iji nye ndị na-azụtaghị ya ike.
Asusu nke ulo a mere vidio bu na o na-emeghari ihu igwe m na-eche oge obula m huru Senator Clinton ka o na-ekwu okwu. Enwere m ọchịchọ ịmata mmetụta vidiyo dị ka nke a nwere ike inwe na mkpọsa. Onweghị ihe dị na vidiyo na-egosi Hillary Clinton dị ka nhọrọ dara ogbenye maka Onye isi ala… naanị ya eche n'ụzọ ahụ.
Ọbụghị naanị na onye ọ bụla wepụtara oge iji mee nke a, ọ bụ onye na-akwado Senator Obama. Emepụtara vidiyo ahụ nke ọma, ana m eche, echeghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị oge ịzụlite. Nke a ọ bụ njedebe nke ọsọ Hillary Clinton maka Onye isi ala?
Nke a bụ mgbasa ozi mbụ sitere na Apple (gosipụtara n'oge Superbowl azụ n'ụbọchị):
Nke a ọ bụ ajọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Nwa amaala? Ọ bụ ihe na-enweghị isi? N'ụwa ebe ihe ọha na eze na-eme bụ ihe niile na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-emefu nde kwuru nde (oge na-adịghị anya ga-abụ ijeri) iji kwalite onyogho a, ọ́ bụghị ya ihe ijuanya na teknụzụ etinyere n'aka otu onye nwere ike imebi ntuli aka dum?
Nke a bụ mgbe ọ na-atọ ụtọ!
You na-agba ndị na-agụ akwụkwọ gị ume ma ọ bụ na-akụda ha mmụọ?
Mar 20, 2007 na 12: 19 AM
M na-enyo enyo nke a ad.
Uda a na-ada ụda dị ka ihe jọgburu onwe ya maka mgbasa ozi ahụ. Aghọtara m na e nwere ihe ụfọdụ dị na mbụ, nke na-akọwapụta "anyị ga-emeri" site n'ịtụba hama. Mana na nke izizi, olu ahụ nwere agwa adịghị mma na ya. Igwe okwu ndị a bụ nnwale doro anya nke Hillary ịbịa dị ka mmadụ oge niile, na-enwe "mkparịta ụka" anyị niile n'otu n'otu, ebe mgbasa ozi mbụ na-ekwu maka "otu ndị, otu uche, otu mkpebi, otu ihe kpatara," na "ogige nke ezi echiche nke onye ọ bụla na-arụ ọrụ nwere ike ịgba akwụkwọ, chebe onwe ya pụọ ​​na pests nke echiche ọ bụla ndị na-emegiderịta onwe ha. ” Ka ọ dị ugbu a, ụda ụda Hillary na-ekwu "achọghị m ndị mmadụ kwenyere m." Ọzọkwa, onyinyo nke nnukwu nwanne gbara ọchịchịrị, ma jikọta ya na mgbidi gbara ọchịchịrị na azụmaahịa mbụ, ebe iche n'echiche Clinton na-acha ọcha na-acha ọcha, aberration na ụlọ monolithic
Ọ bụrụ na m ga-eche isi iyi nke vidiyo a, m ga-eche na ọ sitere na mkpọsa Clinton. Chegodi ihu ya n’enweghi ihe omuma banyere ihe mbu. Imirikiti mmadụ anaghị echeta nke mbụ nke ọma. Nke a bụ nkọwa ọzọ nke vidiyo Clinton: Clinton na-anwa ime ka ndị mmadụ jirila ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka egwuregwu asọmpi, ma ọ bụ agha nke otu, karịa mkparịta ụka, mgbanwe echiche, gbasara otu esi eme ka onye ọ bụla ka mma. Hillary kwuru na ọ "dị ezigbo mma" na "ruo ugbu a, anyị akwụsịghị ikwu okwu." Agbanyeghị, ụfọdụ ikike ọjọọ achọghị ka ị nọgide na-ekwu okwu. Kpọmkwem tupu e wee tụba hama, ihe edere na ihuenyo dị n'elu Hillary na-agụ, "nke a bụ mkparịta ụka anyị." Oge ọzọ anyị ga-ahụ ihuenyo ahụ, Hillary na-amụmụọ ọnụ ọchị ọzọ na-ekwu na "ọ nwere olile anya ime ka mkparịta ụka a gaa n'ihu," tupu obere ụdọ ahụ akụjisịa. Na mgbasa ozi mbụ, na-agbaso mgbawa mbụ ahụ dị ka sledgehammer dara na ihuenyo, anyị na-anụ ọkụ, ikuku dị jụụ, na-atụ aro nnwere onwe. Appearsda a na-egosi na ọ dị nwayọ nwayọ na vidiyo Clinton, na-agbada ụda ma na-atụ aro ifufe oyi nke enweghị ihe efu na obi nkoropụ. Site ugbu a, anyị na-eche n'ezie onye ga-abụ ajọ onye ga-achọ ịkwụsị “mkparịta ụka” anyị. Anyị na-ahụzi ihuenyo ọcha na-enwu gbaa nke na-ekwu, “Na Jenụwarị 14th, Democratic isi ga-amalite. You'll ga-ahụ ihe kpatara na 2008 agaghị adị ka '1984.' ”Rịba ama na 1984 nwere mkpa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye isi ala na-abụghị akwụkwọ Orwell. 1984 bụ afọ Walter Mondale, na-agba ọsọ dị ka onye na-emesapụ aka na-enweghị atụ, tufuru steeti ọ bụla na mba ahụ ma e wezụga Minnesota. Ihuenyo ọcha, nke jikọtara Clinton, na-ekwe nkwa ihe dị iche na 2008, ruo mgbe mkpuchi ojii ojii kpuchiri adreesị weebụ Barack Obama kpuchie ya. Ọ ga-abụrịrị ya chọrọ ịkwụsị mkparịta ụka ahụ.
Mar 20, 2007 na 6: 45 AM
Daalụ maka ogologo ikwu! Ndi oru nta akuko na acho igbali onye obula tinyegoro na YouTube - achoro m ichota. Enwere m obi abụọ na ọ bụ mkpọsa Clinton, n'agbanyeghị. Enwekwara m obi abụọ na ọ bụ mkpọsa Obama, ọ na-akatọkarị mgbasa ozi ọgụ ma zere ya ruo ugbu a. Echere m na ọ bụ onye ofufe Obama nwere ọtụtụ oge na aka ha na ezigbo sọftụwia.
Kama itinye uche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ihe m nwere mmasị dị ka onye na-ere ahịa bụ ihe nke a na-eme ọtụtụ narị nde dollar nke ndị a ga-emefu na mkpọsa ha. Ọ ga-egbochi ọgụ ahụ? Mee ka ha sie ike?
Otu ihe m chọpụtara n'otu ntabi anya bụ na mgbasa ozi John McCain gbagote na Google na-ekwu banyere Hillary Clinton. Ọ dị ka ogige McCain ahụlarị uru na mgbasa ozi omume!
Mar 20, 2007 na 1: 51 AM
"Nke a bụ Ọgwụgwụ nke Hillary Clinton?"
Anyị na-atụ anya ya.
M prolly na-efu ụfọdụ akụkụ nke a, ma ihe bụ "Bad" na video. Dị nnọọ ka ọ bụ nkwupụta nke okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nye m. Mee ka m Mara.
Ọ bụ ntụnyere onye isi ala nke Hillary Clinton na steeti 1984 zuru oke. Ọ bụrụ na ịgụbeghị 1984 nke George Orwell dere, M ga-akwado ya. Ọ bụ ngwa ngwa na-agụ.
O doro anya na ọ bụghị otuto.
ahhh, nweta ya ugbu a. Buru obere oge ma ghara ibu nnukwu na ịgụ ihe. Ironic M na-emefu ọtụtụ nnyocha…
Ihe nkiri vidio Hillary 1984 a na-emebiga ihe ókè. Enwere isi okwu dị mkpa n’ebe ahụ karịa
ntakịrị aghụghọ ịntanetị mgbasa ozi na-enweghị ezigbo ozi, karịsịa nke na-abụghị nke mbụ.
Isi okwu gi zuru oke. O bu ihe nwute, otutu ndi nhoputa ndi mmadu adighi eme votu na nsogbu ndi ozo, obu ezie. Echere m na ọ bụ otu n'ime ụgha nke oge ọhụụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Njọ ma ọ bụ nke ziri ezi, ọtụtụ ndị ntuli aka na-adị mfe.
Ọ bụ ya mere m ji chee na nke a bụ ihe omume na-adọrọ mmasị. Ọ bụ naanị mmalite nke ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-abịa. Amaara m na ọ na-emetụta ndị ntuli aka - mana o doro anya na a ga-enwe otu.
Aghọtara m ma kwanyere di ya ugwu dị ka nnukwu ọkà okwu
Oge ụfọdụ ihe na-atọ ọchị, ọbụlagodi mgbe ebughi n’obi. Enwere m olileanya na ị maara banyere okpukpu abụọ nke okwu ọ bụla na-enweta nke gụnyere okwu "Clinton" na "ọnụ" 🙂
Ọ bụ mgbasa ozi ike, karịsịa ma ọ bụrụ na ị maara nke mbụ (nke Ridley Scott, echere m). Ọ gaghị abụ njedebe nke Hilary n'ihi na enwere ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ dị mkpa, mana ọ bụ ezigbo agbata ebe a. Azụmaahịa banyere nwoke ahụ mere ya yiri ka ọ na-emebi ya.
Anụrụ m na ọ bụ onye ọrụ ngo na otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụfọdụ maka Obama mana kemgbe a chụrụ ya n'ọrụ. Nke ahụ adịghị mma - echeghị m na enwere ihe ọ bụla na-adịghị mma gbasara mgbasa ozi ma ọ bụ ezie na enwere isiokwu doro anya! Achọ m ka nwa okorobịa ahụ dị mma, ọ bụ ezigbo agbapụ.
Nke ahụ bụ ihe kachasị ịtụnanya m hụtụrụla.